Wuxi Innovate Machinery Development Co., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 2010 waxayna ku taalaa Wuxi, magaalo qurxoon oo dhinaca Taihu Lake ah.Waxaan nahay shirkad hi-teknolojiyad isku dhafan oo ka kooban R & D, wax soo saar, qaybinta iyo adeegyo qaraabo ah, oo ku takhasusay naqshadaynta, soo saarista iyo rakibaadda qalab ee Qurxinta, daawada, cuntada, warshadaha kiimikada wanaagsan, iwm.
Iyadoo lagu saleynayo dhaxalka soo saarista qalabka kiimikada ee soo jireenka ah, waxaan fiiro gaar ah siineynaa hagaajinta, hal-abuurnimada iyo horumarinta tiknoolajiyada. Kuma sii dheereysano hal shey, waxaan diirada saareynaa qaababka aan caadiga aheyn iyo khadadka wax soo saarka oo dhameystiran. macaamiisheenna, oo ay ku jiraan naqshadeynta, soo saaridda iyo rakibidda khadadka wax soo saarka ee geeddi-socodka laga bilaabo diyaarinta illaa baakadaha.
Qalabkeenna waxaa lagu soo saaray iyadoo la raacayo heerka nidaamka xakamaynta tayada ee IS09001: 2008, dhammaan badeecadaha waxay gaareen heerarka tayada GMP, alaabooyin badan ayaa laga caddeeyay CE.
Tikniyoolajiyad casri ah, soo saarid dhammeystiran iyo adeegyo caadi ah, shirkadeena ayaa sifiican u qadarinaya macaamiisheenna. Nidaamka maaraynta tayada / deegaanka / badbaadada wuxuu siiyaa asal adag horumarka suuqa, oo daboolaya mid kasta oo ka mid ah macaamiisheenna si ay ugu raaxaystaan ​​alaabada iyo adeegyadayada tayada sare leh.
Wax soo saarkayagu waxaa loo adeegsaday warshado badan oo u adeega macaamiisha dalal badan oo adduunka ah.
Maaddaama aan nahay hoggaamiye teknoolojiyadeed SME (shirkad yar iyo mid dhexdhexaad ah) oo ay caddeyso dowladda Gobolka Jiangsu, waxaan ku jirnaa koritaan joogto ah, horumar degdeg ah, oo soo bandhigaya dhalinta sayniska iyo teknolojiyadda iyo qalab heer sare ah oo kaamil ah alaabtayada. Aynu wada korayno oo horumar wada sameyno, innagoo abuureyna xaalad guuleysi leh oo wax ku biirinaysa shirkadda iyo bulshada!
Waxaan si joogto ah ugu adkeysanay isbeddelada xalalka, waxaan ku bixinay dhaqaale wanaagsan iyo ilaha aadanaha ee casriyeynta tikniyoolajiyadda, iyo inaan fududeyno hagaajinta wax soo saarka, lana kulmeyno rajooyinka laga qabo dhammaan waddamada iyo gobollada.
Dhaqankeenna: Hal-abuurnimo, Daacadnimo, Xadgudub, Daacadnimo